Boston Community Leadership Academy | Boston School Finder
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 7:45am-2:30pm
Lambarka Taleefanka 617-635-8937
BCLA waxay bixisa barnaamijka diyaargarowga kulliyada oo ay la jiraan ogolaanshaha kulliyada sida sharuuda qalinjabinta. Dugsigeena tijaabada wuxuu diirada saara hormarinta hogaamiyayaasha aqoonyahaanka mustaqbalka oo dhinaca waxbarashada adeega bulshada iyo u hogaansanaanta waxbarasho xoogan, bulshada, iyo waaya aragnimada bulshada. Waxaan kula kulana arday walba heerkiisa ama heerkeeda oo u diyaariyaan iyaga inay ku guuleystaan kulliyada. Koorsooyinka waxaa ku jiro fasalada AP, luuqadaha caalamka, iyo farshaxanada. Codadka ardayda qiimo ayay leeyihiin oo waxay ogaysiiyaan dhaqamada dugsigeena iyo xeerarka.
Xarunta Caafimaadka ee Oonleenka ah